Millennials iyo Dib u Heshiisiinta Racial — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Tani waa hadal Trip ka Summit ERLC ku saabsan Injiilka iyo Dib u Heshiisiinta Racial. Hoos waxaa ku qoran qoraal gacmeedka ka fariinta in.
Tani fiidkii, Waxaan ka codsaday in ay hadlaan oo ku saabsan millennials iyo dib u heshiisiinta jinsiyadeed. Oo waxaan ka dareemayaa mudnaan inay halkan u taaganahay oo aad u adeegtaan oo qayb ka ah dadaalka this la yaab leh dhinaca midnimada kiniisadda Ilaah ee.
Sida heesaa ah, Waxaan qayb ka mid ah wax badan oo xaflado sanadihii la soo dhaafay badan oo millennials iyo dadka safafka da oo dhan. Oo haddana waxaan arkay in music runtii waxay leedahay hab dadka mideynaya. Waxaa jira qaar ka mid ah riwaayadaha halkaas oo ay jiraan kaliya hal dadka dadka: waxaa laga yaabaa in ay tahay dhammaan hooyooyinka soccer iyo dhalinyarada magaalada hareeraheeda ah oo cad, ama dhamaan ardayda kulliyadda magaalooyinka, ama dhamaan wadaadada Baabtiisaha koonfurta xiran khakis (Waa hagaag, waxaa laga yaabaa in aan mid ka mid ah in la soo dhaafay). Laakiin waxaa kale oo jira dad badan oo ay ka jiraan dhammaan noocyada kala duwan ee dhallinyarada ah dadkiisa iyo jir, madow iyo caddaan, iyo kooxo kale oo badan. Oo dadka u dhawrtaan oo inta badan la yaabi kala duwanaanta, oo waxaan qabaa inay tahay wax aad u fiican sidoo kale.
Intii aan samayn qabaa in ay qabow iyo yaab leh, Uma maleynayo waa sida cajiib ah sida qaar ka mid ah ka dhigi soo baxay inay noqon. Maalin kasta waxaa jira riwaayada sidan oo dalka oo dhan. Ma jiraan wax u gaar ah oo ku saabsan helitaanka noocyada kala duwan ee dadka soo wada ururiyo ay. Waxaa dhacaya waqtiga la riwaayada oo dhan, dhacdooyinka ciyaaraha, iwm. Marka artist ah ama koox ciyaartooy ah waa xarunta of dareenka, dadka waxaa isu keenay by jacaylka ay music ama kooxda in. dadka Kuwa aadan run ahaantii ma u leeyihiin in ay la midowdo. Waxay xitaa run ahaantii ma leeyihiin si loo wada socdo. Waxa ay u leeyihiin in ay u dulqaadan kasta oo kale oo loogu talagalay dhowr saacadood.
Taasi ma aha nooca midnimo iyo dib u heshiisiin ah in aan tahay ka dib. Wax ka midnimada ma aha waarta. Waxa aanu soo saaraan wax. Dadkani ma run ahaantii u adeegaya mid kale. Oo waxaa uusan dhab ahaantii farta ku ammaanta Masiix iyo Injiil uu si la mid ah.
Nooca midnimada aynu ku jirno ka dib waa waarta iyo in ka badan in ka badan substantial- more jecel.
Nooca midnimada aynu ku jirno ka dib markii aan la soo saaray karaa by danaha muusikada ama dhaqanka caadiga ah kaliya. Nooca midnimada aynu ku jirno ka dib markii la soo saaray karaa oo keliya by Injiil Ciise.
Oo in dabcan waa sababta aan la hadlayo ku saabsan Injiilka iyo dib u heshiisiinta jinsiyadeed, ma ahan oo keliya dib u heshiisiinta jinsiyadeed.
erayadan oo ka John Tixgeli 11:
... Wuxuu sii sheegay in Ciise quruunta u dhiman doono ka, oo aan quruuntii oo keliya, laakiin sidoo kale in la soo ururiyo hal gelin ah carruurtii Ilaah oo kala firidhsan.
Taasi waa nooca midnimada aynu ku jirno ka dib markii:dadka ahaayeen badan oo kala duwan ka mid noqoto oo dhan.
goolka Our dhamaadka aan la qaadan oo keliya dadka madow iyo caddaan isla qolka. Jay-Z samayn karaa in. Hadafkayagu waa inaan dadka ogeysiiyo ah nabadda iyo midnimada in Ciise ayaa hore u dhammeeyo iyo dadka soo wacaya galay IN. Waxaan rabnaa in aan dadka ku raaxaysan buuxnaanta halkaas oo meel walba ka naadi ay u tagaan. Oo waxaan rabnaa in qarni kastaa. Laakiin waxaa iman karaa oo keliya iyadoo Injiil.
guurka: Jiilkii millennial waa dabcan kuwa u dhashay ee 80s hore si ka 2000. Oo annaguna waxaannu (millennials) ku fiican yihiin in marka hore in, nooca fudud ee midnimada. Laakiin waxa ku saabsan in qoto dheer, dheeraad ah oo la taaban karo, iyo nooc ka adag midnimada?
Dhibaatooyinka hortaagan Milennial
Haddii aad tahay millennial ah aniga oo kale, ka dibna waxaan rabnaa in aad ka fiirsan siyaabo aan sii wadi kartaa si ay ula dagaalamaan dib u heshiisiinta. Oo haddii aadan millennial a (aka aad tahay jir), laga yaabaa in aad qaadan karto note of sida loo waco millennials in this aragtida kitaabiga weyn. Taasi tagaa waayo wadaadada, xubnaha ka ah kaniisadda, waalidiinta, saaxiibo, iwm.
Waxaa jira qaar ka mid ah caqabadaha in fikirka ku saabsan dib u heshiisiinta jinsiyadeed iyo qarnigan. Waa ma fududa in loo yeedho dadka labadaba in la soo heshii iyo si ay u dhiiri dad kale wac si isku mid ah. Halkan waxaa ku qoran saddex caqabado gaar ah waxaan qabaa inaan leeyihiin in wacaya millennials in this:
1. millennials qaar ayaa u malaynaya xiisad jinsiyadeed waa dhibaato ayeeyo.
Dabcan wax aad u kala duwan oo hadda ku sugan dalka this badan ay mar ahaayeen. My awoowe uu ii sheegay sheekooyin inaan ma rumaysan karo,aabbahay u caddeeyey intii lagu guda jiray dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah, iyo hooyaday igu sheegayaa sheekooyin of xusuusto isagoo qol hotel beeniyay sida child.Those a ma aha arrin aan waayo-aragnimada. kalasaar sharciyeeyay ma aha mid dhab ah. Oo alaabtii uu is beddelay.
Sidaas, badan oo naga mid ah u qaadan in aynu ku jirno ee wakhtigan oo kale gebi ahaanba kala duwan, taas oo ka dhigaysa xiriirka tartanka mar dambe wada hadal la xiriira. Mid ka mid ah heesaa ayaa sheegay in, "Waxaa jira midab leh Internet ah ma. Midab kaliya ahaa-waa laga yaabaa in sida shan iyo qarniyada oo ka hor ... Midab waa waayo-anigu ma dhihi lahaa ab. Haa, sida shan ab ka hor. Midab ka badan. Waa dadka jir dhawra on haysta on in ay ... "
Tani waa waxa millennials badan qabaa .... "Hadda waxaan ku jirnaa bulsho post-midab. Waxaa jira badan oo guurka interracial in guud. Dabcan waxaan samayn leeyihiin Madaxweynaha madow. Waa dhan ee la soo dhaafay. "
Waxaa wax laga xumaado, qaar ka mid ah baaritaano dhawaan la sameeyay ayaa muujiyay in millennials ha siiyo sinnaanta badan qarniyadii hore adeegga dibinta more, laakiin waxaan weli tahay asal ahaan sida nacayb sida waalidiinteena ahaayeen. Weli, waxaan qabaa inaan nahay post-midab, taas oo ah isku darka khatar ah.
Dabcan, dhacdooyinkii u danbeeyay xataa sida hadalo cunsurinimo ah ka mid ah bahda Oklahoma ayaa muujinaya, in cunsuriyadda waa nool yahay iyo sidoo kale in guud. Laakiin nasiib, haddii ay tahay in isdabamarin, aan diidno jiritaankeeda.
nacayb Racial inta badan waa khiyaano, laakiin in macnaheedu ma aha waa wax ka yar dembi badan. Waxa kaliya ka dhigan tahay waa in ka badan qarsoon ka hor. Iyo in ka dhigi kara adag si ay ula dagaalamaan.
2. millennials qaar ayaa u malaynaya hawlaha warbaahinta bulshada waa ku filan.
Warbaahinta Social waa hadiyad cajiib ah. Waxaan xitaa arkay tartan warbaahinta bulshada iyo abaabulo dadka iftiinka oo ka mid ah arrimaha jinsiyadda ee dhawaan ka dhacay laga xoreeyo dalka ah. Laakiinse jiilka si fudud ku dhacaan dabinka ka fikirida waa ku filan si ay si fudud wax wanaagsan la wadaagto on warbaahinta bulshada. Dadka qaarkood waxay ugu yeedhaan tan debcin-tivism:in Document-ololeeya, xigashooyin daaciyiinta, iyo posts blog on arrimahan, iyo in ay jiraan joojiyo.
Taasi ma ku filan! Waa inaan si dhab ah u qaataan tallaabo ka baxsan in. Ka hadalka ku saabsan online this ama xataa mida saaxiibo waa mid aad u wanaagsan, laakiin ma ahan ku filan. Oo isagoo saaxiibtinimada warbaahinta bulshada la qowmiyado kale iyo dhaqamada wanaagsan yahay, laakiin waxa hubaal ah ma ku filan.
3. millennials Qaar ka mid ah aadan u malayn in erayga Ilaah waa ku filan yahay in maanta.
Wixii Masiixiyiinta millennial, waxaan ku nool nahay maalin halkaas oo Kitaabka Quduuska ah waxaa lama ixtiraamo sida ay mar ahaa. Oo sababta oo ah in, kalsoonideena u gaar ah in Kitaabka Quduuska ah waxaa sii yaraanaya. In Dr. maalin King ee, dadka ku jawaabay in ay run kitaabi, laakiin ma aha in kuweenna. Waa qaybiye. Waxay ku doodayaan in waxa aan dhab ahaantii u baahan tahay waa kala duwan ah, fariin dhan yahay. Oo sidee fariin ahayd in la sameeyo isbeddel dhab ah Ay kasta?
Annagu ma u baahan tahay in ka badan dhawaaqidda Christian Injiil, badan u malaynaysaan. oo wuxuu u wada, oo dhan waxaan u baahan nahay waa jaceylka tallaabo Christian haddii wacdiyaya Injiil ma aha fal. Waxaan si xaqiiqo ah u baahan tahay in ka badan ku wacdiyaya, laakiin waxaan ka raagin karaa wacdiyaya Injiil, ama aan heli doonaa nooca midnimada daqiiqad aan nuurkiisa ku saabsan kor ku hadlay oo kaliya.
Well, kuwa jira saddex caqabado waxaan u maleynayaa inaan la soo wacaya millennials in dib u heshiisiinta midab wajihi. Sidaas, markaas annagu maxaannu nahay in la sameeyo? Haddii aynu nahay hoggaamiyayaasha kaniisadaha ama xubno ka mid ah kaniisadaha ama xitaa waalidiinta, sida aynaan wax ka qaban this ee nolosha aan jiilka?
Halkan waxaa ku qoran saddex xal fudud. Waxaan qabaa kasta oo cinwaanada, kuwaas oo dhan seddex ka mid ah dhibaatooyinka kor ku xusan. Oo wax ugu weyn ee aan doonayo in aan wax miiran guriga waa in kaliya Injiil saarta nooca midnimada aynu ku jirno ka dib markii.
Solution #1: Wacdiyaan Injiilka u heshiisiinta
Waxaan ogahay in ay u muuqataa wax iska cad, laakiin waxa aad muhiim u ah in la wareegay oo wax fiiriyey ka badan.
Waxaan kaliya u dhaqaaqay Atlanta si ay u caawiyaan beeri kaniisad cusub, laakiin ka hor inta aan ahaa on shaqaalaha kaniisadda ee D.C. oo ah xubin ka tirsan waxaa muddo afar sano ah. Inta lagu guda jiro waqtiga aan halkaas, Waxaan arkay kiniisadda koraan wayn ee kala duwan, oo taasu waxay ahayd wax aad u qurux badan si ay u arkaan. Waxaa jiray xubno madow iyo aad u badan, xubnaha Chinese, xubnaha ka weyn, iyo xubnaha ka yar. Waxa ay ahayd wax weyn inaan daawado baabtiisyada halkaas oo waxaa jiray kala duwanaanta waalan this dadka Ilaah waa la badbaadiyo ka mid ah.
Waxa aan ahaa duwanaanshaha kaamil ah, laakiin waxa uu u qurux badan. Oo anigu waxaan qabaa inay ka dhacay, ma waayo, kiniisadda ugu of waqtigeena ku qaatay hadalka ku saabsan dib u heshiisiinta jinsiyadeed, laakiin maxaa yeelay, waxaannu ku qaatay ugu of our time hadalka ku saabsan fariinta aad u heshiisiinta.
Waa maxay sababta kala duwanaanshaha dhici?
Ciise ayaa sheegay in John 12:
Laakiin waxaan, markii layga dhulka ka kor u qaaday, dhammaan xaggaygaan u soo jiidi doonaa
Ciise wuxuu ku yidhi markuu kor uu u qaaday, taasoo la micno ah marka uu dhiman doono iskutallaabta dusheeda, wuu lahaa dadka oo dhan ayuu naftiisa u. Wuxuu ma uu odhan, cayn ah qaar ka mid ah ragga, laakiin dadka oo dhan. Isagu ma halkan takoori. Marka Rasuul Yooxanaa wuxuu isticmaalaa erayga "dhan,"Waxaa macnaheedu ma aha qof kasta oo, laakiin dhammaan kooxaha dadka. In ka badan kaliya Israa'iil, laakiin quruumaha kale oo dhan sidoo kale. Ilaah wuxuu abuuray dadyowga kala duwan, Ciise wuxuu u dhintay iyo inaan ka dhaansado dadyowga kala duwan Xaggiisa.
Tani waa wadnaha of our hadalka halkan. Waxa na kala sooco waa dembi. xididka ah ee cunsuriyadda iyo xiisad jinsiyadeed iyo kala midab waa dembi. Oo Masiix ayaa hore u la macaamilooday dembi dharbaaxo dhimashada dadka oo dhan ah. Waxaan leenahay inaan dadka ogeysiiyo fariin in.
Haddii kale, waxaan lumin doonaa in aannu mar isku dayaya in ay abuuraan nooc ka mid ah oo kala duwan oo midnimo halkii ay xambaareen midnimada Ciise ayaa hore u abuuray. Muujintii 5 Ciise wuxuu ku yidhi, "... Iibsan waayo, Ilaah dadka ka qabiil kasta, afka, dadka, oo quruun. "Kani waxa uu ahaa qorshaha Ilaah oo dhan, oo waxaan u helaysaa in aad u soo sheegtaa!
Waxaan la yaabanahay haddii aad la tiirsan fariin in aad wasaarada. Waa naga hub hoose.
midnimada Injiil tagaa ka qoto dheer yahay qaar badan oo naga mid ah ay ogaadaan. In Efesos 4, Paul waxa uu ka hadlayaa midnimada this qoto dheer. Fiiro jeer oo dhanna wuxuu ka isticmaalaa ereyga "mid ka mid ah."
Waxaa jira jidh keliya iyo Ruux keliya-sida laydiinku yeedhay si ay rajo ka mid ah in iska leh in aad call-Sayid keliya, mid ka mid ah iimaanka, keliya iyo baabtiis keliya, iyo Ilaah keliya oo kulli Aabbe u, kan wax walba ka sarreeya oo dhan iyo in dhammaan. Efesos 4:4-6
Taasi waa ka qoto dheer yahay midnimada kale ee aan loo isticmaalaa in lagu. Oo Injiil waxaa loo baahan yahay inaad na heshiisiiyo jidkaas qoto dheer.
Waxaan millennials u baahan tahay isla Injiil qof kasta oo kale sameeya. Oo waxay soo saarta midnimada runta ah. Sidaas, bal aynu wadno waa halleeya oo waxay ku naadinaysa, xataa haddii dhaqankeena ma doonayaan in ay maqlaan. In dhaqanka guud, waxaan doonayaa in aan arko sharciga, oo aan doonayaa in aan arko Caddaalad. Laakiin bal aynu iloobin waxa ah Xaakinka wax kasta ayaa hore u dhaxasheen.
Injiilka oo keliya abuuri kartaa noocan oo kale ah midnimada. Waayahay, sidaas waxa xal kale waxaa ka baxsan naadiyeen oo kaliya?
Solution #2: Halganka Injiil jacaylka iyo waxgarasho
Waxaan nahay oo dhan aad u yaqaanaan erayada Ciise ee John 13.
Eeg John 13:34-35. "Amarka A cusub, waxaan idin siin: Jacaylka mid kale. Sida ayaan anna idiin jeclaaday, sidaa darteed waa inaad isu jeclaataan. By this dadka oo dhan idinku garan doonaan inaad xertaydii tihiin, haddii aad isu jeclaataan. "
Laakiin waxa looga jeedaa this, iyo waxa ay tani dhab ahaan u eg? jacaylka waxa uu ku saabsan halkan ka hadlayaa waa jacayl quduus ah, waayo, qof iyo ka go'naansho in ay Yehowah u wanaagsan. Waa in aanu Jacayl in quduus ah midkiinba midka kale. Waa in aan ka go'an in ay midba midka kale ee wanaagsan. waa in Waxaan rabnaa in mid ka mid kale oo dheeraad ah Masiixa, koraan more, iyo magooliyey. dhexgalka kasta oo aan la mid kale waxay leeyihiin waa in la gartaa jacaylka.
Laakiin Ciise uusan kaliya dhihi mid isjeclaataan; ayuu ku qeexan yihiin sida aan nahay in midkiinba midka kale jeclaado. sida The: Sida uu noo jeclaatay. Wow! Wuxuu miskiin u noqday noo, adkaystay dunida dembi noo, iyo naftiisa hoos u dhigay noo. Oo wuxuu leeyahay waa in aan is jeclaataan si la mid ah. Iyo in sida ay dadka u ogaan doontaa in annaguse waxaannu nahay xertii uu.
Midkan jecel kale laftiisa fleshes soo baxay in tiro ka mid ah siyaabaha. Inta kale ee Axdiga Cusub dhigeysa yar laakiin jidhka waxa jacaylka u eg.
Galatiya 6:2 – mid Bear midka kale culaabta
Efesos 4:32 – Noqo naxariis midba midka kale
Filiboy 2:13 – tirinayo inuu ka kale ka fiican naftaada ka badan
Cibraaniyada 3:13 – dhiiri mid kale oo maalin walba
James 5:16 – Ilaah u barya mid kale
1 Peter 3:8 – Jeclaataa sida walaalo
Taasi waa jacayl dhab ah.
Ha is illowsiin qayb ka mid ah qofka aan ahay
Halkan waxa, haddii aan dooneynaa in midkiinba midka kale jeclaado, waxaan ku khasbannahay in kasta oo kale oo la ogaado. Waxaan leeyihiin in ay is fahmayaan. Sidee baan culaabta walaalkay dhali karin, haddii anigu garan maayo waxa ay culaabtooda waa? Sidee baan ku noqon kara naxariista aad dhinaca, haddii aanan ogaan cadaadisyada in miisaankoodu aad on? Fahamka kasta oo kale oo waxay nagu caawinaysaa inaad isu jeclaataan si fiican. (celiyaan)
"Waxaan xitaa ma aad arki aadan sidii madow."
laba ka mid ah sano ka hor, Waxaan ahaa isagoo wada hadal la saaxiib dhow of anigaa iska leh, kuwaas oo dhaca in lagu white.We ayaa isagoo nooc fudud walaalnimo jacaylka ee xilligan. Oo isna wuxuu igu yidhi, "Aniga ahaan, aad tahay oo kaliya aan Trip saaxiib. Waxaan xitaa ma aad arki aadan sidii madow. "Hadda waxaan mahad waxa uu isku dayayaa in uu xiriiro ii. Waxa uu ahaa ma sii socotay inay i jecel wax ka yar wax ka mid ah saaxiibada kale ee uu. Laakiin dhinaca kale, Waxaan u maleynayaa in hab aan waxtarka lahayn u aragto kuwo kale. Waxa ay noqon doontaa aniga oo kale ah in mid ka mid ah saaxiibaday hal ku leh, "Waad ogtahay oo keliya ayaan idin arki sida Johnny. Waxaan xitaa ma dareemi aadan in aad tahay qof keli ah. "Waa hagaag, isagu waa hal. Oo qaar badan oo ahaa halganaka uu, hawadooda, iyo caqabadaha la doonayo in wax la sameeyo iyada oo xaqiiqda ah in uu hal.
Oo sidaas daraaddeed waxaan ku dhiirri-galiyay saaxiibtinimada aan in aan inta badan ka fekerto aan madowga mar kasta oo uu ka hadlayaa in waxa hele laakiin sidoo kale in aan iska yeel sidii ma ahan waxaa jira. Sababtoo ah waa, iyo waxa aanu saamayn noloshayda.
1. Maxaa yeelay, waxaan ahay madow. Waxaan jeclaan isagoo madow. Oo Ilaah wuxuu iga dhigay sidan.
2. Waxaa jira waayo aragnimo u gaar ah in la timid iyagoo madow, ama ardayga, ama hooyo a, ama hal.
My waayo-aragnimo madow
Qaar ka mid ah oo naga mid ah ma aha inay ka fikirto our qowmiyadda badan oo nolol maalmeedkeena. Iyo in ganaax. Laakiin waxaa jira dad kale oo naga mid ah in la sameeyo. Oo anigu waxaan kaliya naftayda iyo waayo-aragnimo madow waayo, la hadli kartaa. Aanan u hadli karin, waayo, qof walba.
Waxaa jira culays dheeraad ah aan, iyo dad badan oo madow, waxay leeyihiin si ay u fuliyaan. Waxaan qaadaan culayska of garanaya taariikhda dulmi ee dalkeenna: in kiiyoo aan la tixgeliyo dadka buuxa, in qaar ka mid ah tirooyinka on our lacag leedahay dadka madow sida hantida, og midab wali jira, oo isagoo qaataha ah ee cunsuriyada in mararka qaarkood.
wacyi An of this beddelo qaabka aad u jecel yihiin qof.
Waxaa jiray marar badan marka wax ayaa la wareegay aniga igu saabsan(aan run) kaliya ku salaysan aan muuqaalka. Marar badan, waxa la qiyaasayaa in aan ahay whenI dambi dheeraad ah ma noqon karaan kuwo ka. Marar badan waxa la qiyaasayaa in aan carrabka la'aa oo wax baran ahay. Marar badan waxa la qiyaasayaa in aan ahay liita dhiggooda cad ama aan sida wanaagsan ma ihi. Markaasaa dadkii waxay u malaynayaan in ay si cad u ii. Aan xuso dadka referencing i jecel siyaabo waxyeello. Like maqalka dadka ku odhan, "Your walaasheed waa kinda quruxsan, gabar madow waxaan ula jeedaa. "Sida haddii madow waa yar qurux. Waxaa jira nidaamyo of this ee noloshayda iyo nolosha dad badan oo. Waxaan mari doonaa in aan la hadlo wiilkayga, sida aabahay sameeyey ila, isaga oo ka digay in ay taxaddar iyo in ay jiraan dad kuwaas oo isaga aan jeclaan doonaa oo kaliya sababtoo ah waa madow. Oo waxa ay culays dheeraad ah si aan u leeyihiin in ay qaadaan.
Muxuu arrinta waayo-aragnimo?
Laakiin sababta arrintan ku sameeya? Waa maxay sababta layga aad waxyaalahan oo dhan u sheegay? Sababta oo ah amarkiisa in midkiinba midka kale jeclaado. Just sida aad jeceshahay in aad hooyaday hab gaar ah, oo waa inay wadaaddadiinna, ama dadka yar-nasiib, waa inaad u jeclaataa qowmiyado kala duwan siyaabo kala gaar ah. Waxaan leenahay farxadaha gaar ah, culaabta, iyo waayo-aragnimada, oo ma aad u jeclaan karaa dadka kale si fiican haddii aad ka qaadista ama iska indha-aragnimadooda gaar ah.
Xusuustaa anigoo la sheekeysanaya walaal Shiinaha oo lagu soo biiray our kaniisadda. Waxay kaliya ee dalalka muddo gaaban, iyo sidii ayay u hadlay oo ku saabsan waayo-aragnimo oo leh iyada wacdinta, ayay tidhi siday u adag tahay ayaa iyada in la raaco. Waxaan marnaba u maleynayaa ku saabsan in si qoto dheer haddii kale. Waxaa gebi ahaanba jidka u fiirsaday aragnimada walaalaheeda sida annagoo kaniisad bedelay, iyo waxa ay iga caawiyeen in ay ka fekeraan si taxadar dheeraad ah oo ku saabsan sida si ay u jecel yihiin.
Ehelka Injiil wuxuu ku soo saari karaan oo kaliya noocan oo kale ah jacaylka nicmoolayda. Sidaas, waxaan u baahanahay inaan dib ugu Ciise galaan si ay u shaqeeyaan inagu dhex jira. Waxaa adag noqon doonaa, oo ii keena aan dhibic soo dhaafay.
Solution #3: Ha u qaadan Waa Easy
Diversity tusiyo quruxda iyo run ee Injiilka. Marka uu qof u yimaado in our kaniisadda, oo waxay arki duwanaanta-a nooca duwanaanshaha iyagu ma ay arkaan in dunida waxa uu iyaga ka siinayo bidhaamaysa ammaanta Injiil. Qorniinku wuxuu leeyahay qof kasta oo ku baaqay in on Rabbiga magiciisa ku badbaadi-ma doonto kaliya hal koox oo dad-waana u qurux badan marka taasi in la soo bandhigay in jirka ah ee degaanka awood.
Kala duwanaanta ka dhigaa wax adag
Diversity waa wax aad u qurux badan; laakiin ma ahan sahlan. Kasta oo kaniisad-xitaa haddii dadka waxaa ka mid ah isir isku mid ah, da'da, background- leedahay arrimaha sababtoo ah waxaan dembilayaasha tahay. Laakiin kala duwanaanta waxay keeni kartaa arrimaha u gaarka ah. Waxaan dhamaanteen keeni jeeda noo gaar ah, waayo-aragnimada, maluhu, eexasho, iyo alaabta ay weheliyaan nala. Oo marmarna abuurta khilaafka.
Kitaabka ma ah mid halmaansan khilaafka this. Xataa in kaniisaddii hore, waxaa jiray qaybahoodii kala gedisan (sida laga diiwaan geliyay Falimaha Rasuullada). Sidaas, tan iyo markii ay adag noqon doonaa, halkan waa tabo dhowr ah random sida in ay ka shaqeeyaan iyada oo dhibaatooyinka kuwa:
Talooyin dhab ah u heshiisiinta Racial
1. Ha lagu daweeyo dadka kala duwan yihiin aad u kala duwan.
kala duwan ay ma yihiin hoose. Raadi si ay u fahmaan, laakiin weli ula macaamilaan kuwa kale si caadi ah. Waxaan qabaa kartaa waqti markii aan ku soo laabtay Philly, marka professor ah had iyo jeer ii hadli lahaa si ka duwan. Waa uu salaami jiray ardayda kale la a, "Subax wanaagsan,"ama, "Good inay ku arkaan." Laakiin wuxuu igu iyo dhammaan tidhaahdaan kadis arki lahaa, "Waa maxay ilaa eey?"Ama" Maxaa ku dhacey nin aan?"
Waxa uu joogey yaabaa war duwanaanshaha aan aan dareemin eg lahaa in ay ka hadlaan igu si ka duwan.
2. Ha u qaadan qufulan.
kooxaha Ethnic, kooxaha da'da, iwm. ka kooban yihiin shakhsiyaad. waayo-aragnimada Dadka kala duwan yihiin. qufulan qaarkood waa funny oo u sir la'aada, laakiin qaar kale waa gaf. Hel in la ogaado qof walba shaqsi ahaan.
3. Isku day in aadan kaliya ido dadka ha idin fiiriyo sida.
Si ula kac ah la dhiso xiriir la dadka aan idin fiiriyo sida. La dagaallama jirrabaadda in ay kaliya markii la waawayn aad ugu dabiici xirmaan lahaa la qaataan. Ka dib markii kaniisad, ula kac ah u leh dadka kala duwan ka hadlaan. Ma aha sida shaqo ah, laakiin maxaa yeelay, waxay yihiin hadiyad jidhka oo keliya jeclaan dadka kuwa badan oo aad sida.
4. Si ula kac ah inay fahmaan dadka.
Tag qoto dheer relationally. Weydii su'aalo. Si taxadar leh u dhageyso oo nixi waayo-aragnimada gaarka ah ee dadka. Xitaa haddii aad tahay qof ka walaacsan wax qof ayaa sheegay in, ka hor inta uusan u saaray, uu dhegaysan iyagii iyo inay fahmaan
5. Dulqaadashada iyada oo dhibaatooyinka iyo xanuun sii kordhaya.
Diversity waa adag, gaar ahaan marka aan bilaabin hadalka ku saabsan jinsiyadda / qowmiyadda. Qaar ka mid ah sheekada ka heli kartaa waqti. Naxariiso mid ka mid kale oo la. Had iyo jeer u qaadan sida ugu fiican oo aan ugu xumaa. Haddii qof doonaya in la fahmo aad dulmiyaan, ahaado mid raxmad badan iyo bukaanka iyaga la. Waxa isku dayaya. Ha gelin derbiyada kor oo aad u macquul aheyn in dadka si aad u hesho dhow iyo fahmo. Waa wadada laba-jid.
Marka doonaya in la fahmo qof, ha ka baqin in aad waydiiso su'aalo ama wax qalad ah. Waa in aad si taxadar leh u doorato erayo aad, laakiin waxa aad helaysaa in ay qaataan halista iyo filan walaalahaa wiilal iyo gabdhoba inuu ahaado mid raxmad.
Ha kor u siin marka ay adag tahay. Taasi waxay keenaysaa in a kala duwan dulqaad uun halkii ay kala duwanaanta midaysan.
6. Is weydii haddii aad qabto fikrado ku saabsan jinsiyadaha / da '/ kooxaha kale ee dhaqaale.
Taasi waa su'aal aan waa in dhammaan la weydiinaya nafteena. Work in ay ka fekeraan in ka badan kitaabku / cadaalad ah. oo dhan waa in Waana Warsanaynaa habka aan ka fekero dadka kala duwan nagu badan, oo ay ku jiraan oo kala duwan oo dhaqan ahaan iyo jinsi. Waa maxay soo dhaca maskaxdooda markii aad noqotay qof dariiqyada? Maxaa ku soo dhaca maskaxdooda marka aad aragto in dukaanka? Waa in aan su'aasha annaga iyo dadaalaan in ay dadka u arkaan jidka Ilaah wuxuu u arkaa.
7. Ka dhig wada hadalka u socda.
Tani waa in ay ahaataa mid ka mid ah sheekaysiga badan. Tani ma aha hab kasta oo wadahadal dhamaystiran. Tani waxaa loogu tala galay in ay bilaabaan wada xaajood kale. Midnimada in kala duwanaanta ma dhici on shil. Oo haddii aan marnaba la hadal waxa ku saabsan, waxaan ma noqon doonto war iyo shaqeeyaan waxa dhinaca. walaac Share iyo halganka, laakiin shaqada si loo hubiyo in aad leedahay sheekada u naxariistay, dareenka, nimcadii, iyo jacaylka.
Haddii aan kama hadlaan waxa ku saabsan, waxa aynu la kulanaa khatarta ah ee sii socda in loo qaato in dhibaatadan ayaa durba la macaamilooday ee la soo dhaafay. Oo markii dhibaatooyinka jira, laakiin waxaan tahay halmaansan, waa sida dhibaatooyinka korontada ee gurigaaga. Waxaad toosaysaa adiga karin ilaa maalin maalmaha ka mid dabka! Waxaan u baahan nahay in laga war ku filan oo ay si fiican ula dagaalamaan.
8. Fikiraa, Qorniinka iyo Ilaahay ka baryayaa idin siin doonaa hamiday ah midnimada.
Midnimada waa heshiis weyn, sidaa darteed waa in aan ilaahay ka baryaynaa in koraan lahaa hamiday, waayo,. Waxaan amray in la isku maan. Waxaan amray in la ogaado xaqiiqada ah in aan nahay mid ka mid ah Masiixa. Tani ma aha fikirka ah waxaan abuuray. Fiiri Efesos 4. Fiiri ballan qaadyada Ilaah ee caalamka Ibraahim Bilowgii. Fiiri sida ay u dhan dhamaado Muujintii. Oo Ilaahay ka baryayaa ku siin lahaa hamiday ah ee noocan ah ee midnimada.
Laakiin, marar badan horay sida aan sheegay, Ehelka Injiil wuxuu ku soo saari karaan oo kaliya noocan oo kale ah jacaylka qurbaan iyo midnimada.
Waxaan rabnaa in aan shaqada si gelin Injiilka soo bandhigay dunida si ay u arkaan.
In da'da ah iyo wakhtigaas u muuqataa dheeraad ah oo ku kala badan abid, Rabbiga this isticmaali kartaa. Ereyga Ilaah waa ku filan yahay. Oo dadka Ilaah waa sida sawir ah Ilaah wuxuu isticmaalaa in uu bannaanka ku Word. Mid ka mid ah uu isticmaalaa in la sameeyo Injiil uu iftiimi dhalaal.
Ma aha oo kaliya madow iyo caddaanka isla qolka, laakiin madow iyo caddaanka oo qoyska ka mid ah.
Si qoto dheer, midnimada run.
Michael • April 9, 2015 at 11:47 waxaan ahay • Reply
Qaar ka mid ah fikirrada fiican halkan. Anigu waxaan ahay cad, laakiin wuu baxay dugsiga sare iyo kubada cagta ciyaaray ku dhawaad ​​oo dhan guys madow. Sidaas, Waxaan ahaa xaqiiqo ah in laga tirada badan yahay ee dugsiga sare (oo ay ilaa iyo haatan ku-qolka labiska). Koraaya kor ku Arkansas-Missisippi Delta, xiisado tartanka ahaayeen (oo weli ku jira) xaq dushiisa. Waxaad si joogto ah maqli comments negative ka labada dhinac oo ku saabsan kale ka. Waa wax laga xumaado. waa maxay adag la faquuqay aad jinsiyad gaar ah oo isku dayaya in ay gaaraan baxay si uu tartanka ka soo horjeeda. Waxaan arkay gacanta ugu horeysay sida midab danbe waa karaa madaxa fool xun kaniisadda dhexdeeda. Waa xun. Anigu waxaan ahay shukriya guys aad sida, Trip, kuwa doonaya in ay isku dayaan oo arrimahan ay waajahaan marka laga eego xagga injiilka ku salaysan. Waxaanu ugu baaqay in walaalkeen jeclahay, iyadoo aan loo eegayn waxa maqaarka midabka walaalkeen dhacaya noqon. Aan u xiisoodo maalintii kaniisadaha multi-midab ka jira guud ahaan Delta. Laakiin, sida kaliya ee aynu halkaa ka heli doontaa waa by doonaya in ay ku noolaadaan baxay injiilka on joogta ah maalin walba iyo in si dhab ah ula kac ah oo ku saabsan.
jeclaataa this, Trip! Waxaan dhawaan bilaabay keentay goobo dib u heshiisiinta jinsiyadeed iyo haddii akhristayaasha aad jeclaan lahayd qaar ka mid ah manhajka free, waxay booqan kartaa boggan si download http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
Jacaylka waxa aad sheegtay oo ku saabsan ma iska indha kala duwan oo aasaas u kitaabi midnimo our!
“Ma aha oo kaliya madow iyo caddaanka isla qolka, laakiin madow iyo caddaanka oo qoyska ka mid ah.” AAMIIN!
Si wanaagsan. Sidaas daraaddeed loo baahan yahay. Sidaas waxtar leh. Waxaan ka codsan doonaa waxyaalahan. Thanks.
Rolfstlund • April 10, 2015 at 6:47 waxaan ahay • Reply
Waxaan u sheegay ka hor inta – Trip Lee waa wax wacdiya fiican oo yeela in bashaash ah, hab fudud oo waa run …. barakaysan !!!
heer, cad oo qeexan.
Otis • June 27, 2015 at 8:39 waxaan ahay • Reply
Maanta waa markii iigu horeysay webpage on this. Waxaan la socda Trip music marnay oo ku saabsan 3years ka hor iyada oo Lecrae. Waxaan Ilaah naftiisa ku mahad naqaan oo i ayaa runtii ku riyaaqay waxbarista this. Waxaan ku nool Ghana, halkaas oo 99% oo naga mid ah waa madow laakiin dhibaatada halkan waa ka badan qowmiyadda.(ma dagaalladii qowmiyadeed ee Ghana, inkastoo dadka dalxiisayaasha ah.) Waxaan la micno qaar ka mid ah waxaa loo arkaa ah ” dadka saxda ah”. Waxaan unahay bartay ka waxbariddan oo aan codsan doonaa in aan nolol maalmeedka. Ku mahadsan tahay in aad ku turaanturoon iyo Ilaah ha idiin barakeeyo.
magaca • December 14, 2016 at 3:39 waxaan ahay • Reply
Hello, saaxiib Raadinta !
Lacey • Laga yaabaa 14, 2017 at 10:13 waxaan ahay • Reply
Waxaan looknig for post sidaan oo kale ah weligood (iyo maalin)
Trip Teaching Great. Waxaan u jeclaaday. (Zambia)
Olivia • June 18, 2018 at 12:32 waxaan ahay • Reply
Waxaan jeclahay hadalka iyo waxbariddan. Kaliya waxaan lahaa wada hadal la mid ah oo leh saddex carruur ah oo aan. Waxaan isticmaali doonaa this article in la xoojiyo sida ay tahay in aan jeclahay sida Ciise. Waxaan ka mahadcelinayaa Trip nool injiilka oo bara inay sidaas oo kale sameeyaan. Ilaah ha idiin barakeeyo oo dhan.